7 indray voan’ny coronavirus Lasibatra hatramin'ny zaza vao 9 volana
Nisy trangana coronavirus 7 vaovao ny 4 sy 5 mey, ary tsy nisy kosa ho an'ny omaly 6 mey, araka ny tatitra nataon'ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Niakatra ho 158 izany ny olona voamarina fa voa eto Madagasikara. Iray tamin’ireo no avy eto Antananarivo, izay tovolahy 15 taona. Ny 6 kosa dia avy any Toamasina avokoa, ka zaza 9 volana ny iray, lehilahy 21 taona, lehilahy iray sy vehivavy 3 izay tsy fantatra ny tena mombamomba azy. Tsy mifidy taona ny tsimokaretina covid-19 ka io zaza 9 volana io no zandriny indrindra, ka fifampikasohana tamina olona voa no nahavoa azy. Tsy misy soritr’aretina izy ary arahi-maso akaiky ny fahasalamany. Tokony tohizana foana ny fampinonoana, olona tokana no tokony hikarakara ny zaza, ary mila hajaina ny fepetra toy ny fanaovana arovava. Mila manaja hatrany ny fenitra ara-pahasalamana, ary tsy tokony horokorohana ny zaza, ary fadiana ny manao ilay hoe hampidirina kely any am-bava aloha ny sakafo vao hafahana azy. Olona 82 kosa ny zokiny indrindra amin’ireo voa eto Madagasikara. Miakatra hatrany ny isa any Toamasina satria saika tany amin’iny faritra Antsinanana iny hatrany ny ankamaroan’ireo voa tato ho ato. Miisa 3907 ny vita fitiliana nanomboka ny 19 martsa nidiran’ny coronavirus hatramin’ny 4 mey teo. 3 hatramin’ny 6% eo ny taham-pahavoazana mitaha amin’ny fitiliana vita. Manodidina ny 64% eo kosa ny taham-pahasitranana izay 101 hatreto, ary 57 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana. Tsy mitsaha-miakatra ny isan’ny voa, ka aleo mailo sy mitandrina hatrany. Mila manao arotava sy manasa tanana matetika ary manaja hatrany ilay elanelana 1 metatra ny rehetra na lehibe na ankizy, n'aiza n'aiza toerana aleha.